Messi Vs Ronaldo: Maxaa iska badalay loolanka loogu jiro xili ciyaareedkan abaal marinta Golden Ball, kadib kulamadii la ciyaaray isbuucan? – Gool FM
(Yurub) 11 Feb 2019. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa awooday inuu soo yareeyo farqiga goolasha u dhexeeya isaga iyo kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi, ee ku aadan loolanka loogu jiro ku guuleysiga kabta dahabka ah ee Golden Ball ee lagu abaal mariyo gooldhaliyaha ugu sareeya 5-ta horyaalka ugu waaweyn ee qaarada Yurub dhamaadka xili ciyaareedka.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay goolkii 2-aad ee kooxda Juventus, kulankii xalay ay guusha kaga gaareen Sassuolo horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, kaasoo ku soo idlaaday 3-0.
Laakiin taasi badalkeeda kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa ku fashilmay in uu wax gool ah ka dhaliyo kulankii adkaa ay xalay ku wajaheen Athletic Bilbao horyaalka La Liga ee dalka Spain, kaasoo ku soo idlaaday barbaro 0-0 ah.
Roanaldo ayaa sare u qaaday akoonkiisa goolasha horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, kadib goolkiisii xalay wuxuu gaaray 18 gool, taasoo ka dhigtay in uu booska 2-aad ka soo galo loolanka loogu jiro abaal marinta Golden Ball, balse wuxuu goolashan kala siman yahay weeraryahanka kooxda PSG ee Kylian Mbappé.
Dhinaca kale ayaa wali ku hogaaminaya 21 gool horyaalka La Liga ee dalka Spain, balse wuxuu loolan adag kala kulmayaa xidiga ay ku dagaalamaan kubada cagta ee Ronaldo,
dhinaca kale waxaa xusid mudan inaan la iloobin loolankan inay qeyb ka yihiin xidigaha Kylian Mbappé iyo Mohamed Salah oo isna ilaa iyo haatan horyaalka Premier League kasoo dhaliayay 17 gool.
Hadaba halka hoose kaga boggo sida loo kala sareyo loolanka loogu jiro xili ciyaareedkan kabta dahabka ah ee Golden Ball, kadib kulamadii xalay la ciyaaray:
Lionel Messi: 21 gool.
Cristiano Ronaldo: 18 gool
Kylian Mbappé: 18 gool
Mohammed Salah: 17 gool
Sergio Aguero: 17 gool
Edinson Cavani: 17 gool
Fabio Quagliarella: 16 gool
Sarri oo Sharxaad ka bixiyay Sababta uu u diiday Salaanta Guardiola....(Macalinka City oo isna hadlay)